6 Amathiphu E-SEO Okushintsha Igeyimu: Indlela Lawa Amabhizinisi Akhule Ngayo I-Organic Traffic Yaba Izivakashi Zanyanga Zonke Ezingu-20,000+ | Martech Zone
Emhlabeni wokuthuthukisa injini yokusesha (SEO), yilabo kuphela abaye baphumelela ngempela bangacacisa ukuthi yini edingekayo ukuze ukhulise iwebhusayithi yakho kumashumi ezinkulungwane zezivakashi ngenyanga. Lokhu ubufakazi bomqondo iwubufakazi obunamandla kakhulu bekhono lomkhiqizo lokusebenzisa amasu asebenzayo futhi likhiqize okuqukethwe okungajwayelekile okuzolingana.
Ngochwepheshe abaningi be-SEO abazishoyo, besifuna ukuhlanganisa uhlu lwamasu anamandla avela kulabo kuphela abakwazile ukukhulisa imikhiqizo yabo futhi bathole ukuvakashelwa kwanyanga zonke kuka-20,000. Sasinesithakazelo ku- isosi eyimfihlo yethrafikhi enhle yezinto eziphilayo, ukubonakala okuphezulu, namawebhusayithi ekhwalithi ehlukile.
Ngezansi, sifaka amathiphu angu-6 aphezulu e-SEO okushintsha imidlalo avela ezinkampanini eziphezulu ezikwazile ukwakha amawebhusayithi adumile athola ukuvakasha kwanyanga zonke okungama-20,000:
Dala imibiko usebenzisa idatha yobunikazi:
Omunye wabashintshi bethu abakhulu begeyimu ubesebenzisa idatha yobunikazi ukuze shicilela imibiko kamuva esabalalisa ezintathelini. Sibone amawebhusayithi amaningi esebenzisa idatha etholakala esidlangalaleni ukuze enze imibiko futhi abelane ngayo nezintatheli. Kodwa-ke, sinomuzwa wokuthi idatha yobunikazi ibaluleke kakhulu futhi izodala intshisekelo eyengeziwe. Lokhu kungenxa yokuthi uhlobo lukahulumeni lwezibalo lutholakala kunoma ubani, futhi izikhathi eziningi, izintatheli zincamela ukucaphuna idatha yobunikazi kanye nemininingwane ehlukile kunemibiko evamile.
U-Amra Beganovich, i-CEO, U-Amra & Elma
Ama-athikili ababhali abakanye nabaholi bemboni:
Ngenkathi siqala, saya kubaholi bezimboni abaningi ngesiphakamiso sobambiswano ukuze sibhale ama-athikili ababhali noma senze izingxoxo zokunye okushicilelwe kwemidiya okuhle kakhulu, amabhulogi, namanye amasayithi aphezulu. Sasazi ukuthi iningi labo linolwazi oluyingqayizivele kanye nokuqondisisa kwemboni ethile okushicilelwe okuningi okungayazisa kakhulu. Ngakho abaningi babo bavumelana nalolu hlobo lokusebenzisana njengoba babethola ukubonakala okwengeziwe kanye ne-PR.
Siqondise abaholi abanjengabagqugquzeli, ama-blogger, ababhali, abaculi, ngisho nezintatheli ezazifuna ukukhangisa amabhizinisi azo. Abaningi babahleli bewebhusayithi bagxume ethubeni lokuthola okuqukethwe okukhethekile. Kwakuyisimo sokunqoba.
Michal Sadowski, CEO, I-Brand24
Nikeza ngokuqukethwe okukhethekile kwamasayithi adume kakhulu:
Akukho okudlula ucezu lokuqukethwe olubhalwe ngendlela ehlukile ngumuntu ongaphakathi embonini. Besingakaze sesabe ukwenza umsebenzi futhi sibhale kuphela izindatshana zamawebhusayithi agunyazwe kakhulu embonini yethu. Okubalulekile wukugxila ekwazini ngempela abahleli nokuqonda ukuthi bafunani. Uma uthuthukisa uhlobo lokuqukethwe olufanele abafundi bakho, cishe bazokushicilela ngaso sonke isikhathi. Ithiphu elengeziwe ukuthi uhlale unesizotha, usheshe ukuphendula, futhi ubonise umhleli ukuthi ulandela ikhwalithi ngaphezu kobuningi.
U-Sara Routhier, Umqondisi Wokuqukethwe, Quote (Inkampani yabazali I-AutoInsurance)
Qala ngemboni ye-niche:
Besifuna ukubhekana nemboni ye-niche futhi sikwenze lokho ngendlela ewusizo nethembekile. Sisemkhakheni wezinsizakalo zezobuchwepheshe nezamafu, futhi sigxile ngokukhethekile ekwakheni isithunzi esizwakalayo embonini yethu.
Sasingakaze sibe nesithakazelo ekubeni yizinto zonke kubo bonke abantu. Esikhundleni salokho, inhloso yethu enkulu bekuwukufinyelela abathanda imboni ababelana ngezinto esizithandayo nabaqonda ubuchwepheshe bethu. Emqondweni wethu, ukumaketha okungcono kakhulu kuwuhlobo lokuthengisa oluphuma emlonyeni, futhi wonke amasheya engeziwe esiwathole kubafundi bethu ayibhonasi eyengeziwe.
U-Adnan Raja, iPhini likaMongameli Wezokumaketha, i-atlantic.net
Sebenzisa ihluzo ezihlukile:
Besihlose ukuxhumana nemiqondo okunzima ukuyiqonda sisebenzisa ihluzo ezilula kakhulu nezibonwayo. Sinikele ngalezi zithombe kunoma yimuphi umhleli ofuna ukuthuthukisa okuqukethwe kwakhe. Uma sishintshana, sicele ukuthi basinikeze isikweletu kuphela. Sithathe isikhathi sokwenza ihluzo namavidiyo aklanywe ngobungcweti esizakwethu esisebenzisana nabo emhlabeni wonke ukuze sibasize baphumelele emikhankasweni yabo ye-SEO.
UMaxime Bergeron, Umqondisi Wenethiwekhi, I-CrakRevenue
Sikhulise ubudlelwano bethu nabahleli ukuze sinikeze amanye amabhizinisi ithuba lokubhala ngokubambisana noma ukuhweba okukhulunywe ngakho kwemidiya kokunye okushicilelwe okuphezulu. Satshala imali ekwakheni inethiwekhi yamabhizinisi nezintatheli, sabe sesihwebelana ngamathuba nabanye abanikazi bamabhizinisi. Okubalulekile lapha wukuhlala ngempela embonini ethile nokugcina izinga eliphezulu. Ukuhweba kusebenza kuphela uma kwenziwa namanye amabhizinisi asezingeni eliphezulu noma okushicilelwe. Akukho ukulungisa okusheshayo. Konke kwakumayelana nokudala nqoba-wina izimo.
U-Janice Wald, i-CEO, Ikakhulukazi Ukubhuloga
Azikho izinqamuleli zokwakha umkhiqizo okhethekile onethrafikhi ephezulu yemvelo. Kuthatha isikhathi, isu, nokucabanga ngaphandle kwebhokisi. Ngokugxila kokuqukethwe okuhle kakhulu, ubambiswano lwamasu, ihluzo, nezingxoxo zeziphathimandla, amabhrendi angasiza ukwakha indlela ebanzi yokukala nokwamukela amashumi ezinkulungwane zezivakashi ngenyanga. Ngokulandela ezinye zezeluleko ezingenhla, izinkampani zingaqala ukwenza izinguquko ezingaguquki ezizoshintsha ngokuhamba kwesikhathi imikhiqizo yazo, ithrafikhi, kanye nemali engenayo.
Tags: adnan rajaAmra & ElmaAmra Beganovichi-autoinsurancei-backlinkbrand24umbhali ohlangeneUkukhangisa Okuqukethweokuqukethwe okwehlukileihluzoidumela eliphakemeu-janice waldmichal sadowskiikakhulukazi ukubhulogaInethiwekhiimboni ye-nicheUkucaphunaUSara routierukusebenzisa ngokugcwele injiniseookuqukethwe kohwebo